SHARAXAADA SOO SAARKA Tooska ah silig sawir qaade ah ayaa dhinta badanaa waxaa loola jeedaa noocyo kala duwan oo silig sawir qaade ah oo dhinta, iyo sidoo kale jiidista sawirka sawirka dhinta. Sida birta loo soo jiido daloolka dhimashadu wey yaraanaysaa oo xitaa qaabkeedu wuu isbeddelayaa. Birta dhinta waxay ku filan tahay soo jiidashada biraha jilicsan sida dahabka iyo qalinka. Dhimashadu waxay yeelan kartaa godad badan oo kala duwan. Sawirka siliggu wuxuu si ballaaran u dhintaa ...
SOO SAARKA SOO SAARKA Biinanka dhinta ee loo yaqaan 'Mian die pin' waa rod riix ah Si loo fududeeyo qaybaha inay ka soo dhacaan caaryada, nadiifinta waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo qallafsanaanta qaybaha iyo caaryada. Waqtigan, usha loo yaqaan 'jacking ul' ayaa loo baahan yahay si looga saaro qaybaha caaryada, waana inay ahaataa mid aan ka yareyn waxyeellada dusha sare ee qaybaha fur. waxay ku habboon tahay soo saarida qaybaha waxay leeyihiin saxsanaanta iyo shuruudaha dusha sare, qaybaha la midka ah iyo cirbadda taageerada, jumlada fidsan, tuubada, iwm.
SHARAXAADA SOO SAARKA Dhimista geerida waxaa inta badan loo isticmaalaa jarista qaybaha geesaha. Timo jarista waxay ku haysaa furka ama xinjirowgu waa mid siman oo qurux badan wajiga dhamaadka, kaas oo ku habboon kulanka soo socda.Waxaa laga sameeyay qalabka HSS ee leh PVD / CVD daahan Dhimashadayada jarista waxay ku habboon tahay kaarboon iyo bir bir ah. Waxay ku timaaddaa cabbirro kala duwan oo loogu talagalay M4 ilaa M24 handarraabbadeedii. Qalabka lagu daray: M2, M35, M42. Waxaan soo saari karnaa isku-darka heerka ama sawirkaaga xoqan, oo waxaan sameyn karnaa R&D ...
QAYBTA SOO SAARKA Badeecadda Punch waxay ku saleysan tahay birta xawaaraha sare leh, birta xawaaraha sare ku jirta, birta tungsten iyo caaryado kale, oo ku habboon wax soo saarka birta ee qaybaha caaryada, cinwaanka qabow, qaboojinta qabow, shaabadaynta, haydarooliga, cirbadeynta duritaanka iyo warshadaha kale ee wax soo saarka. Feer hexagon waa feer caadi ah oo lowska ah.Waxaa nala soo saaray feedhka hegagon-ka ee M3 ilaa M20. Haddii aad dalbato faraantiga loo yaqaan 'haxagon punch pin', fadlan ii soo sheeg dhexroorka, dhererka, A (ballaca Hexagon), F (qoto dheer Hexagon). Waxaan soo saari karnaa ...
DRYWALL THREAD ROLLING DI SOO ​​SAARKA FAHANKA SOO SAARKA Mawjada duudduubku waa udhimasho caadi ah oo loogu talagalay mashiinka mashiinka lagu xiro.Waxa laga sameeyaa qalabka HSS oo leh daaweynta carburizing.Waxaa loo isticmaalaa soo saarista dunta falka. Mawjadeenna wareejinta waxay u dhiman tahay daboolka qallajinta, xoqitaanka xajmiga, is-qodista qashin, furitaanka, Qoryaha qoryaha, mashiinka mashiinka, Qalabka guryaha, Qalabka elektarooniga ah, Isku-darka iskudhafka, Blot, Nuts iyo boolal kale. Waxaan soo saari karnaa isku-darka heerka ama sawirkaaga wareejinta. Oo waxaan samayn karnaa R&D a ...
SOO SAARKA SOO SAARKA Carbide die waa geerida caadiga ah ee mashiinka mashiinka lagu xiro.Waxay ka sameysan tahay walxaha loo yaqaan 'tungsten' oo leh awood sare iyo adkaansho, caabbinta daxalka, iska caabbinta iyo caabbinta heerkulka sare.Waxaa loo isticmaalaa soo saarista madaxa iyo qeybaha jirka. . Wax soo saarka Mian ee carbide wuxuu dhintaa: dhinta ugu weyn, feedhka koowaad, kan jarjaraha dhinta, mindida wax gooya, kiiska feerka koowaad, kiiska feerka labaad, iyo carbide kale ayaa dhinta Dhammaan carbide waxay u dhintaan qallajinta darbiga, furista qashinka, is-qodista fur ...